नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको हो ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ – छैन !
काठमाडौं ।पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) का सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने आँकडामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रै नबढेर मृत्यु हुनेको दर पनि बढेको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको अस्पतालहरूको भनाइ छ । दैनिक झन्डै ३५ सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित भइरहेका छन् । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सङ्क्रमित र अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको चाप बढेको हो । सङ्क्रमितसँगै अस्पताल भर्ना हुने दर बढेपछि नेपालमा सङ्क्रमणको अर्को लहर सुरु भएको त होइन भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरुले आङ्कलन गर्न थालेका छन् ।
कोरोनाको दोस्रो लहरमा ग्राफ उच्च हुँदा वैशाख २८ गते एकै दिन ९ हजार ४ सय ८३ जना सङ्क्रमित भएका थिए भने २२५ जनाको मृत्यु भएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरमा सङ्क्रमणको ग्राफ ओरालो लागेपछि पुनः बिस्तारै ग्राफ उकालो लागेर सङ्क्रमण र मृत्यु दर उकालो लागेकाले तेस्रो लहर सुरु भएको जनस्वास्थ्यविद्हरुले बताउन थालेका छन् ।कोरोना सङ्क्रमण र अस्पताल भर्ना हुने बिरामी ह्वातै बढेकाले कोरोना सङ्क्रमणको नयाँ लहरको सुरुवाती भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा.बाबुराम मरासिनीको आङ्कलन छ । ‘अघिल्लो लहरमा सङ्क्रमित, अस्पताल भर्ना हुने दर र मृत्यु हुने दर पिक पाइन्टमा पुरेर बिस्तारै ग्राफ तल झेरेपनि बिस्तारै माथिमाथि सर्दै गएकाले यो नेपालमा नयाँ छालको सुरुवात हो,’ डा. मरासिनी भन्छन् ।
​वैशाख १ गते ६०३ जना सङ्क्रमित भएका थिए भने ३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्दै दोस्रो लहरको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै वैशाख २९ गते उच्च सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । २९ गतेपछि सङ्क्रमित र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी बिस्तारै घट्दै गए पनि दुई साता यता अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी धमाधम थपिन थालेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक अनुप बाँस्तोलाको भनाइ छ । त्यसै दोस्रो लहरमा सङ्क्रमितको ग्राफ उच्चविन्दुका पुगेर फेरि तल झरिसकेपछि पुन बढेकाले अर्को छाल सुरु भएको उनको अनुमान छ ।
वैशाख १४ गते ४ हजार ५ सय २४ गते सङ्क्रमितको पुगेपछि उपत्यकामा १५ गते बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । उपत्यकामा कडा निषेधाज्ञा जारी गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड बिरामी बढ्न थालेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फोक्सो रोग विशेषज्ञ तथा कोभिड संयोजक डा.नीरज बम बताउँछन् । ‘दोस्रो लहरमा सङ्क्रमण उच्च विन्दुमा पुग्दा बिरामीलाई भुइँमा राखेर समेत उपचार गर्ने स्थिति थियो, बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमण दर घट्दै जाँदा टिचिङ अस्पतालको कोभिड वार्ड कुनै दिन खाली समेत भयो,’ उनले भने, ‘गत शनिवार यता कोरोना सङ्क्रमित बिरामी बढ्न थालेका छन्, पुनः सङ्क्रमणको नयाँ सुरु हुन लागेकाले बिरामी बढेका हुन सक्छन् ।’
पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितसँगै अस्पताल भर्ना हुने दर बढ्दा जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा चिकित्सकहरूले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको अनुमान लगाएका छन् । यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रोको सुरुवात नभएको बताएको छ । सङ्क्रमित, अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुने दर बढे पनि तेस्रो लहर भन्न नमिल्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ग्राफमा उच्च विन्दुमा पुगेर बिस्तारै ओरालो लागेर पुनः बिस्तारै उकालो लागेको अवस्थालाई कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो भन्ने आधार नभएको स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. पौडेलले जिकिर गरे ।
पहिलो लहरमा सङ्क्रमितको दर उच्च विन्दुमा पुगेर बिस्तारै घट्दै गएर १०० जना भन्दा कम सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको थियो । पहिलो लहरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च विन्दुमा पुगेर ०७७ माघ १८ गते सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै १०५ जानमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । क्रमशः माघ १९ गते १५९, १७१, १४२, १७१, १०५ र माघ २४ गते कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९९ मा पुष्टि हुँदा मृत्यु दर शून्य थियो । यसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च विन्दुमा पुगेर स्वाट्टै ओरालो पहिलो लहरमा लागेको थियो ।
त्यसपछि चैत्र १३ गतेसम्म सयको हाराहारीमा सङ्क्रमितको पुष्टि भयो । चैत्र १३ गतेदेखि बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेर ३० गतेसम्म आइपुग्दा ५५९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो । पहिलो लहरमा सङ्क्रमण दर उच्च विन्दुमा पुगेर १०० भन्दा कम सङ्क्रमित र मृत्यु शून्य भएर केही समय सङ्क्रमणको अवस्था स्थिर भएर पुनः सङ्क्रमण दर बढेकाले दोस्रो लहर भनिएको प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए ।
हाल दोस्रो लहरमा सुरु हुँदा १०० भन्दा कम कोरोना सङ्क्रमितबाट बढेर वैशाख १६ गतेसम्म आइपुग्दा ४ हजार ९ सय २८ सङ्क्रमितको पुष्टि भएको थियो भने २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको उच्च विन्दु वैशाख २८ गते पुगेको थियो । त्यस दिन ९ हजार ४ सय ८३ सङ्क्रमित भएका थिए भने १३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वैशाख २९ गते ९३०५ सङ्क्रमित भए भने १६८ मृत्यु भयो ।
३० गते ८९६० सङ्क्रमित हुँदा २१४ मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ । ३१ गते ८५२० मा सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने २०३ मृत्युको भयो । जेठ १ गते ८१६७ सङ्क्रमित हुँदा १८७ मृत्यु भयो र २ गते ७३६८ सङ्क्रमित १४५ मृत्यु भएको छ । यसरी दोस्रो लहरमा सङ्क्रमित र मृत्यु दर क्रमशः घट्दै गएर असार २० गते १६०३ जना सङ्क्रमित हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्क्रमण दर उच्च विन्दुमा पुगेर बिस्तारै घट्दै दुई महिनासम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्थिर भई २५ सय देखि ३ हजारसम्म पुष्टि भइरह्यो ।
कोरोना सङ्क्रमण दर लामो समयसम्म स्थिर रहेर ग्राफ नघटी पुनः उकालो लागेकाले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर भन्न नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ता डा. पौडेलको भनाइ छ । पुनः सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएर साउन ३२ गते ३४५१ मा सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । भदौ १ गते ३२७४ जना सङ्क्रमित हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । २ गते ३४०३ जनाको मृत्यु हुँदा ४२ जनाको मृत्यु भयो भने ३ गने ३०७५ मा कोरोना पुष्टि हुँदा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा सङ्क्रमित सङ्ख्या उचाइमा पुगेर पहिलो महामारीमा जस्तो मृत्यु दर शून्य र सङ्क्रमित १०० जना भन्दा तल नझरेकाले तेस्रो लहर भन्न नमिल्ने प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए । तेस्रो लहरका सँग जुध्नका लागि सरकारले तयारी गरे पनि नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर कायम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ ।